ဖခင်ဖြစ်လိုသူများသတိ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Health & Fitness » ဖခင်ဖြစ်လိုသူများသတိ
Posted by ချစ်တတ်သူ on May 18, 2012 in Health & Fitness | 16 comments
ဖခင် ဖြစ်လိုသူများ အင်တာနက် သုံးရင် သတိထား
ဖခင် ဖြစ်လိုသူများ အင်တာနက် သုံးရင် သတိထားအာဂျင်တီးနား သိပံ္ပပညာရှင် များဟာ ကျန်းမာတဲ့ အမျိုးသား ၂၉ ဦးရဲ့ သုက်ရည် နမူနာ များကို Wi-Fi ဖြင့် အင်တာနက် ချိတ်ဆက် ထားတဲ့ လက်ပ်တော့ ကွန်ပျူတာ တင်ထားတဲ့ စားပွဲအောက်မှာ ထားခဲ့ပါတယ်။
၄- နာရီ ကြာပြီးတဲ့ နောက်မှာ အဲဒီနမူနာ များထဲမှာပါဝင်တဲ့ သုက်ပိုး ကောင်ရေ ရဲ့ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းဟာ လှုပ်ရှားကူး ခတ်မှုမရှိတော့တာကို တွေ့ရ ပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ တူညီတဲ့အပူချိန် အောက်မှာ Wi-Fi နဲ့ အင်တာနက် ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ လက်ပ်တော့ရဲ့ အနီးမှာမဟုတ်ဘဲ အခန်းထဲမှာထားတဲ့ သုက်ရည်နမူနာများထဲမှာတော့ ၄ နာရီကြာတဲ့အခါ သုက်ပိုးကောင်ရေ ၁၄ ရာခိုင်နှုန်းသာ မလှုပ်ရှားနိုင် ကြောင်းတွေ့ရတယ်။
ဒါ့အပြင် သုက် ပိုးတွေရဲ့ ၉ ရာခိုင်နှုန်းမှာ DNA ပျက်စီးမှုတွေ့ရပြီး Wi-Fi အင်တာနက် အနီးမှာ မထားတဲ့နမူနာသုက်ပိုးတွေ ထက်စာရင် ၃-ဆများပါတယ်။ အကြောင်းရင်းကတော့ ဝိုင်ယာလက်စ် ချိတ်ဆက်မှု ပြုနေစဉ်မှာ ထွက်ရှိလာတဲ့ လျှပ်စစ်သံလိုက် ထုတ်လွှတ်မှု Electromagnetic Radiation ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
ရရှိတဲ့ အချက် အလက်တွေအရ အင်တာနက်နှင့် ကြိုးမဲ့ချိတ်ဆက် ထားတဲ့ ကွန်ပျူတာ အနီးမှာ အမျိုးသားရဲ့ မျိုးပွားမှုဆိုင်ရာ အင်္ဂါများ ရောက်ရှိနေခဲ့ရင် သုက်ပိုးရဲ့ အရည်အသွေးကို ကျဆင်းစေကြောင်း တွေ့ရပါတယ်။ အင်တာနက်နဲ့ ကြိုးမဲ့ ချိတ်ဆက်မှုပြုမထားတဲ့ ရိုးရိုးလက်ပ် တော့ကတော့ လျှပ်စစ် သံလိုက်လှိုင်း တွေ ထုတ်လွှတ်မှုရှိပေမယ့် ထိခိုက် မှုမရှိတဲ့ပမာဏသာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဝိုင်ဖိုင်သုံးနေတဲ့ ကျနော်တို့ အတွက်တော့ စိုးရိမ်စရာဘဲဗျို.့ ။
ကျောင်းမှာ ကလေးတွေ အတွက်တော့ ဒီလို သတိပေးကြတယ်။
However, schools, parents and staff are often unaware of the enormous number of scientific studies now published which suggest that mobile and wireless technologies which emit microwave radiation may poseahealth risk, especially to children. The science is published in scientific journals, often only available to subscribers. The concerns of scientists and scientific studies are not always communicated to the public. Thus schools rely upon the statements about the use of wireless technologies in schools made by the UK Health Protection Agency.
တစ်ချို့ က ဒီလို ပြန်ပြောတယ်။
Is Wi-Fi internetahealth hazard?
wi-fi.orgWiFi access points (hotspots) and wireless routers operate in 2.4 GHz or5GHz radio wave frequency. This electromagnetic radiation is non-ionizing (unlike X-rays, for example) and is considered harmless. According to World Health Organization, exposure to WiFi and mobile phone radiation below international guideline limits does not result in any adverse health effects.
WiFi networks basically use the same frequency as microwave ovens (~2.4 GHz), although withamuch lower output power. Whileatypical microwave will output about 800W,abasic wireless home router only uses up to 100 mW (20 dBm) – and that’s the power level at the transmitter antenna itself (if you stand just 1 meter away, the exposure will be much smaller).
Still, some people claim they get headaches and feel physically ill when around Wi-Fi equipment. There’s evenaterm called EMF sensitivity for people who can “feel” electromagnetic fields and waves. The medical and scientific community doesn’t seem to consider thisareal medical condition, however.
ဆိုတော့ အလယ်အလတ် လမ်းစဉ်လိုက်ကြတာပေါ့။
ကျွန်တော်ဆီ ရောက်လာတဲ့ သတိထားစရာကောင်းတဲ့ စာလေးကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
ပုံတော့မတင်ဘူးလို့ တင်တော့ဘူး။စာထဲမှာလဲရှင်းနေတာမို့ ပါ။
အခုပြောမယ့်အကြောင်းအရာလေးကို ပေါ့ပေါ့ဆဆမတွေးပဲ သေချာ တွေးစေချင်ပါတယ် ။ ပြီးရင် ကိုယ်နဲ့ နီးစပ်ရာတွေကိုလည်း ပြန်လည်ဖြန့်ဝေပေးစေချင်ပါတယ် ။ အရင်ဆုံး စမ်းသပ်ချက်လေးတစ်ခုကို ပြောဖို့လိုပါတယ် ။ စမ်းသပ်ချက်ပြုလုပ်ဖို့အတွက် သင့်ဆီမှာ မိုဘိုင်းဖုန်း ၂ လုံးနဲ့ ကြက်ဥ သို့မဟုတ် ဘဲဥ တစ်လုံးရှိရပါမယ် ။
ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း ဖုန်းနှစ်လုံးအလယ်မှာ ဥ ကိုထားပြီး နေရာချထားလိုက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ ဘာတွေဆက်ဖြစ်သလဲဆိုတာ လေ့လာကြည့်ကြရအောင် ။
ကဲ နေရာချထားပြီးပြီဆိုရင်တော့ ဖုန်းနှစ်လုံးကို ဆက်သွယ်မှု ( Call ) ကို စတင်လိုက်ပါ ပြီးရင် ၆၅ မိနစ်အထိ ထားပါမယ် ။ ပထမဆုံး ၁၅ မိနစ်မှာတော့ ဘာမှမဖြစ်သေးပါဘူး ။ ၂၅ မိနစ်လောက်ကြာပြီးတဲ့အခါမှာတော့ ဥ ဟာ ပူစပြုလာပါပြီ ။
၀ိုးးးးးးးး ၄၅ မိနစ်လောက်ရှိလာပြီဖြစ်တဲ့အခါ ဥ ဟာ အရမ်းကို ပူလာပါပြီ ။ သင်ဟာ ၆၅ မိနစ်အထိ ထားမယ်ဆိုရင်တော့ ဥဟာ စားသုံးလို့ရအောင်ကို ကျက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ် ။
ကဲ သင်ဘာတွေ မြင်လိုက်ရသလဲ သင်ဘာတွေတွေးမိလိုက်ပါသလဲ ။ မိုဘိုင်းဖုန်းတွေရဲ့ radiation အသံလှိုင်းတွေက အချိန်အမှတ်တစ်ခုရောက်ပြီဆိုရင် ဥထဲက ပရိုတိန်း တွေကို ကျက်သွားစေနိုင်ပါတယ် ။ ကဲ ဒါဆိုရင် ပရိုတိန်းတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ သင့်ဦးနှောက်ကို ကပ်ပြီး ၄၅ မိနစ်ကျော်ကျော်လောက်ဖုန်းပြောရင် ဘာတွေဖြစ်နိုင်ပါသလဲ ။
အလွန်ကို အန္တရာယ်များပါတယ် ။ Nerve လို့ခေါ်တဲ့ အာရုံကြောတွေ ပျက်ဆီးနိုင်သလို မှတ်ဥာဏ်ပိုင်းဆိုရင်ရာ စနစ်တွေဟာလည်း radiation တွေကြောင့် ထိခိုက်နိုင်ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် ဒီမိုဘိုင်းဖုန်းတွေကထုတ်တဲ့ အသံလှိုင်းတွေဟာ လိပ်ပြာတွေကို သေစေနိုင်ပါသတဲ့ ။ ကဲ ကျွန်တော်တို့အားလုံး ဖုန်းပြောမှု ကြာချိန်ကို လျော့ချကြရအောင်လား ။ တတ်နိုင်သမျှ လိုအပ်သလောက်ပဲပြောဆိုကြပါစို့ ။ ဒီ မက်ဆေ့လေးကိုလည်း သင်ချစ်သော သူငယ်ချင်း နဲ့ ညီအကို မောင်နှမများကို ဝေမျှပေးလိုက်ပါ ။
ကြက်ဥသတင်းက.. မှားယွင်းတဲ့သတင်းလို့ ဖေါ်ပြထားပါတယ်..
Netlore Archive: Forwarded emails offer ‘scientific proof’ that you can cook an egg by positioning it between two cell phones and placingacall.
Description: Forwarded article
WiFi Sperm သတင်းကတော့ မှန်ပုံရပါကြောင်း..
Shane McGlaun, Nov 30th 2011 Discuss 
Wifi Rourter ကြီး ဖင်ခုထိုင်နေရတဲ့ ကမှော့်လို ဆိုင်သမားများ ဘယ်နှယ့်လုပ်ရပါ့မလဲ
၀ိုင်ဖိုင်ကို ရှောင်ပါဆိုပေမယ့် အဲဒါကြီးကိုပဲ လိုင်းမကောင်း ကောင်းအောင် လုပ်နေရတယ်
ဒါပေမယ့် သိပ်ပူစရာ ရှိမယ်မထင် …
မှော်သားသားရေ လာဟေ့ … KTV သွားရအောင်..
ခလေးလုံးဝမလိုချင်တဲ့ သူတွေအတွက်တော့ နည်းပညာအသစ်ပေါ့။
ဒါဆို အနော်တို့က ကွိပြီပေါ့
နေ့တိုင်း wi fi နဲ့သုံးနေတာဆိုတော့
အင် … တစ်ကယ်လား … အနော်က server room မှာဆိုတော့ router တွေနားနေရတာ … မိန်းမတောင်ယူရသေးဘူး … …. သွားပါပြီ ….
အဟီး တော်သေးဒယ်… ပြီးပြည့်စုံသွားလို့ …
ထပ်၍ နောက်တဖန် မလိုတော့ပါ …
လူငယ်လူရွယ်လူလတ် တို့ အတွက် သတင်းကောင်းပါ ( ရှောင်ရှားရန်) …
ကပ်ပယ်အိတ်ကို သတ္တုပြားကာထားတဲ့ အန်ဒါဝယ်ရာတွေရှာဖွေပြီးဝတ်သင့်တယ်။
သဂျီးတို့တိုင်းပြည်မှာ အဲဒါမျိုးတွေ မထုတ်လုပ်သေးဘူး လားလို့ မေးကြည့်ပါလား။
ကွန်ပူတာလော့သိဝူး.. ဆဲလ်ဖုံးဂို ဘောင်းဘီအိပ်ကပ်ထဲထည့်ပီး ဗိုင်ဘရိတ်လုပ်ထားတုန်း ဖုံးမြည်ရင် ညီလေးခမျာ တုန်တက်သွားဒါဘဲ…။
ဟုတ်ရဲ့ လားဗျာ ကျွန်တော် အမြဲ လက်ပ်တော့ ကိုပေါင်ပေါ်တင်ပြီး ဆိုဖာပေါ်မှထိုင် တီဗီ ကြည့်ရင်းသုံးတာ ခုဆို ၅ နှစ်လောက်ရှိသွားပြီဗျာ အော်မေ့ လို့သမီးလေး မွေးထားတာမကြာသေးဘူးဗျာ ၅ ပတ်လောက်ပဲရှိသေးတယ် အကိုတော်တို့ ညီတော်တို့အားမလျော့ ကြပါနဲ့ အချိန်တန်ရင် နပိန်ကန်ပါလိမ့်မယ် Enjoy your life bros!